မြန်မာ အက္ခရာ အရေးလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် Phew App - Mobile Mother
Cart / Ks 0.00 0
450 CDMA Handset
800 CDMA Handset
All800 CDMA HandsetAccessoriesAlcatelAppleapple watchAsusBluetooth HeadsetBluetooth HeadsetBluetooth SpeakerCar ChargerCaseChargerCircle TechCool PadCoolpadEarphoneFlash DriveFlip CoverGioneeHeadphonesHisenseHocoHolder CoverHTCHuaweiivviKenboLenovoLGMeizuMobiloNillkinNokiaOne Plus FiveOppoOUKITELPhone Ring HolderPower BankRemaxSamsungScreen GuardScreen GuardSelfie StickSelfie StickSingtechSonyStandStand CaseSYHTabletTop UpTravel AdapterTrue smart4Type-C AdapterUncategorizedUSB CableUSB Car ChargerView Stand CaseVivoWaterproof BagWaterproof CaseXiaomiXOLOZenfoneZOPOZTE
မြန်မာ အက္ခရာ အရေးလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် Phew App
iTunes Store ပေါ်မှာ မြန်မာ App ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးရောက်နေတယ်ဆိုလို့ သွားကြည့်လိုက်ပါတယ်။ Revo Tech ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Phew ဆိုတဲ့ Application ဖြစ်ပြီး မြန်မာအက္ခရာ အရေးအသား လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက် ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ စာလုံးရေးသားရာမှာ ရောင်စုံ ရေးနိုင်တဲ့အတွက် ကလေးတွေပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ မြန်မာစာရေးနည်းသင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iPad နဲ့ ဂိမ်းဆော့နေမဲ့အစား စာရေးနည်းလေ့ကျင့်ပေးထားရင် ကျောင်းတက်တဲ့အခါ အဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အက္ခရာတစ်လုံးကို ၁၂ ကြိမ်ရေးရမှာဖြစ်ပြီး ပထမ ၆ ကြိမ်မှာ dotted line လေးတွေအပေါ်ကထပ်ရေးရမှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခါမှာတော့ အလွတ်ရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အက္ခရာတစ်လုံးစီကို မှတ်မိမှာပါ။ Size အနေနဲ့ 12.0 MB ရှိပြီး iPad တွေပေါ်မှာသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Application က free ဖြစ်ပြီး ကကြီးကနေ ဈ အထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ‘က’ ကနေ ‘အ’ အထိပါတဲ့ Full Version ကိုတော့ $1.99 နဲ့In App Purchase မှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Download > https://itunes.apple.com/app/phew-myanmar-alphabets/id884964143
Samsung က စမတ်ဖုန်းများအတွက် 512GB Storage Chip ကို ထုတ်လုပ်
Full Bezel-less LG G7 ရဲ့ Concept ဗီဒီယို ထွက်ပေါ်လာ
Ooredoo ရဲ့ Viper မှ 24 နာရီ၊7ရက်၊ တစ်လ စာပို့ အထူးအစီအစဉ်
WeChat ကို လစဉ်အသုံးပြုသူ
လူကြီးမင်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်၍ ကျွန်တော်တို့ Mobile Mother မှ အချိန်တိုင်း တွေးတောကြံစည်ပြီး အစဉ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
Samsung က စမတ်ဖုန်းများအတွက် 512GB Storage Chip ကို ထုတ်လုပ် Comments Off on Samsung က စမတ်ဖုန်းများအတွက် 512GB Storage Chip ကို ထုတ်လုပ်
Full Bezel-less LG G7 ရဲ့ Concept ဗီဒီယို ထွက်ပေါ်လာ Comments Off on Full Bezel-less LG G7 ရဲ့ Concept ဗီဒီယို ထွက်ပေါ်လာ
Mobile Mother (Headquarters) 26th Street, Between 77 & 76, Haymarzala Quarter, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay, Myanmar. 02-72041, 02-72042, 02-30885
Copyright © 2020 Mobile Mother | All Rights Reserved 2014. Another Creation of Media Lane.